Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): PJS တွေဖမ်းလို့ပြည်သူ စစ် တွေ ထောင် ထဲ ရောက,
at 4/22/2016 10:52:00 AM
Thomas Nhkang shared Myutsaw Kasa's post to the group:မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး လမ်းဘ ရော့ ယန် နမ္မတီး.
PJS တွေဖမ်းလို့ပြည်သူ စစ် တွေ ထောင် ထဲ ရောက,် ကြား လို့ မှ ကောင်းသေး လား?
18 ya shani Mung Baw mare hpung Pat Jasan ni hte Mung Baw P.T.Ts Du Mun Awngahpyen hpung ni pawng nna P.T.Ts magam gun Miwa Lauban LangaiaKa-ni rung hpe shang zing ai. Miwa gaw galoi mung anhte mungdan hpe jahten ai, anhte hpe akyang jahten ya ai, bungli sha chye galaw ai.
PJS တွေဖမ်းလို့ပြည်သူ စစ် တွေ ထောင် ထဲ ရောက,်ြ